Cusbooneysiiyay !! Dhibaatooyinka shaashadda ee Android | Androidsis
Francisco Ruiz | | Amniga, Khiyaamada Android, Tababarada
Waxaad rabtaa gab dahaadhka shaashadda? Mid ka mid ah su'aalaha ay isticmaaleyaasha nidaamka hawlgalka Android ay i weydiinayeen waqtiyadii ugu dambeeyay, gaar ahaan dadka isticmaala nuqulada Android Marshmallow, noo kaalay xagga ogolaanshaha Android iyo si gaar ah dhibaatooyinka shaashadda dusha sare ee Android, ruqsad ka jirta Android noocyada qaar ee nidaamka qalliinka iyo tan tan iyo markii Android M wax laga beddelay wax yar oo ay ku jiraan qayb gaar ah oo ku saabsan dejimaha barnaamijkeenna 'Android' oo aad u qarsoon, si aad u badan oo adeegsadayaal badani wax fikrad ah ka helin halka laga helo ikhtiyaarkan ku dhex jira goobaha Android.
Taasi waa sababta aan u go'aansaday inaan abuuro qoraalkan fiidiyowga ah, oo aan ku sharxayo waxa saxda ah ee ka kooban Ogolaansho marin u hel shaashadda dusha 'Android M'. Sidoo kale, waxaan fursad u siiyaa inaan si faahfaahsan ugu sharraxo codsiyada inta badan adeegsada, taas iyo taas, marka lagu daro inaan ku tusiyo tallaabo tallaabo halka saxda ah dejintu ay tahay in lagu maareeyo barnaamijyada laga yaabo inay adeegsadaan kuwa oggolaanshaha shaashadda shaashadda in, xaaladaha qaarkood waxay ku sababi karaan dhibaatooyin barnaamijyada qaarkood ee Android iyo meesha laga helo waa odyssey dhab ah oo loogu talagalay dadka isticmaala khibrada yar.
1 Waa maxay dhab ahaan shaashadda dusha sare ee Android?
2 Sideen ugu hagaajiyaa arrimaha shaashadda dusha sare ee Android?
3 Fiidiyowgii hore si loo joojiyo shaashadda dusha sare
Waa maxay dhab ahaan shaashadda dusha sare ee Android?
Shaashadda iskudhiska ah ee Android waa rukhsad gaar ah taas Waxay u oggolaaneysaa codsiyada inay noqdaan kuwo joogto ah oo lagu muujiyo dusha sare ee codsiyada kale inaan ku shaqeyneyno terminaalkeena Android. Tani waxay ku jirtay noocyo ka hor Android M, waxay ahayd ogolaansho in codsiyada ay si otomaatig ah u heli karaan adoo si fudud ugu daraya codsigan marin u helka dukumintiga muuqaalka ah.xml ee horumarinta dalabka laftiisa. Oggolaanshahan adeegsanaya ALERT_SYSTEM_WINDOWS, oo ah noocyada Android 6.0 Marshmallow, sida dhammaan rukhsaddaha ay helaan barnaamijyada Android, waxaa soo maray isbeddello gaar ah oo ku saabsan maamulkooda, haddana markaan codsi qabanno markii ugu horreysay waxaa nala weydiin doonaa inaan helno dhammaan rukhsadaha in Codsiga kor ku xusan wuxuu u baahan yahay inuu u shaqeeyo sidii la rabay.
Tan darteed iyo baahida loo qabo in tan la maareeyo ogolaansho loo arko inay khatar badan tahay, qayb cusub ayaa lagu soo daray goobaha Android, halkaas oo aan ka maamuli doonno rukhsadaha shaashadda shaashadda ah.
Adiga si aad ugu fahamto qaab aad u fudud, oo ka mid ah codsiyada ugu caansan ee leh shaashadda ogolaashaha shaashadda ee Android, waxaan u tirineynaa astaan ​​caan ah codsiga Facebook Messenger iyo muuqaalkeeda lagu daray ee na tusinaya ogeysiinta fariimaha cusub ee la helay sida astaan ​​dul sabaynaysa oo loo yaqaan dadka oo dhan sida Messenger goobooyin o Madax Wadahadal.
Codsi kale oo ka dhigaya isticmaalka shaashaddan shaashadda ah inuu si habboon u shaqeeyo ayaa laga heli karaa, tusaale ahaan, cusboonaysiinta ugu dambaysa ee Google Translate iyo shaqadiisa cusub ee hal-taabasho Translate, hawl noo oggolaaneysa, xulashada fudud ee qoraal kasta oo gujinaya ikhtiyaarka nuqul, in a dul sabaynaysa Google Translate astaanta taas oo laga heli karo tarjumaadda degdegga ah ee qoraalka la soo guuriyay.
Oggolaanshahan waxaa loo tixgeliyaa Android inuu yahay mid aad khatar u ah ama khatar badan leh maaddaama ay u adeegsan karto codsiyada xaasidnimada ah si loo abuuro shaashad dusha sare ee barnaamijyadeenna asalka ah, shaashadda dusha sare ee barnaamij aan la arki karin oo soo qaban kara taabashadayada shaashadda oo xadi kara macluumaadka ama naga dhig mid gujinaya adoon ogeyn meesha aan dhab ahaan ka qabaneyno, sida inaan kuwaa iska qorno Adeegyada SMS ee ceebta ah ee madax xanuun dhab ah ah.
Sideen ugu hagaajiyaa arrimaha shaashadda dusha sare ee Android?
Sida ugufiican ee aan kuugu sharaxo fiidiyowga ku lifaaqan cinwaanka qoraalkan waxaanan ku tusayaa talaabo talaabo meesha aad kaheleyso shaashadan iskudhafyada ah ee ku yaal Android M, si hagaaji arrimaha guud ee shaashadda ku saabsan Android M, waxay kufilan doontaa kaliya in la ogaado arjiga gaarka ah ee sababaya dhibaatada aan soo sheegnay, ka dibna aad wadada Dejinta / Codsiyada / Maamulaha arjiga oo gujinaya qaybta midig ee kore ee shaashadda, on badhanka menu-ka ee loo soo bandhigi karo sida cogwheel, oo ah qaab seddex dhibcood ah ama ka hooseeya ereyga MAS.
Qaabkan fudud waxaan ku heli doonnaa maareynta shaashadda dusha sare ee Android M, oo aan ka awoodno ama gab dahaadhka shaashadda gabi ahaanba ama xitaa maamulida rukhsadaha shaqsi ahaan dhammaan codsiyada aan ku siinay shaashadda shaashadda oggolaanshaha.
Fiidiyowgii hore si loo joojiyo shaashadda dusha sare
Waxaan kaaga tagaynaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee aan duubno oo aan sidoo kale ku sharraxno sida loo demiyo shaashadda dusha sare ee Android, oo ah dhibaato dhibsasho ah oo inbadan oo idinka mid ah haysato
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Jooji dusha sare ee shaashadda
222 faallooyin, ka tag taada
Laakiin haddii astaanta yar ee barnaamijka ee aad u baahan tahay inaad ku siiso rukhsad dusha sare ah, kama muuqanayso liiska barnaamijka. Sideen ku siin karaa hordhaca? Xaaladdan oo kale waxaan u baahanahay barnaamijka maxaa yeelay wuxuu ka yimid bangi. Waxaan waalanayaa raadinta wado aan ku xaliyo dhibaatadayda. Waxay igu tuseysaa barnaamijyo aad u yar oo liiska ku jira. Waad ku mahadsan tahay inaad i caawisay.
Ku jawaab Nilsa
Waa salaaman tahay, hadda waxaan rakibey cusbooneysiintii ugu dambeysay waxaanan bilaabay inaan la dhibto kiiskan nacaladda leh .. Qof ma caawin karaa xallinta shaashadda shaashadda ah .. Horeba waan isku dayay wax walba oo aan waxba ahayn ...
Fadlan salaan, waan ogahay in arintu ay duug tahay, laakiin kuwa cusub ee arkaa inay tani tahay xalka kiiskooda tan iyo markii ay igu dhacday Samsung s6 ama s5 waxay aadayaan goobaha - Maareeyaha Codsiga markay baxaan waxay arki doonaan sadex qodob dhinaca bidix ama erayga riix halkaas oo dooro codsiyo halkaasna gacanta ku kala saari kara mid midna ka saaraya astaanta buluuga ilaa cawl waana taas, barnaamij walbana wuu u habeyn karaa sida ay nasiib u rajeeyaan
Jawaab Franc Ch
Thanks Franc way ii shaqaysay 100%
Waxaan arkay oo tijaabiyey midka ah, haddii aad ku rakibtay arjiga nadiifka ah ama xoojinta arinka (taasi waa waxa loogu yeero), codsiyadaan qashinka ah ayaa xannibaya codsiyada, waxaan rajeynayaa in kiiskaagu yahay
Haddii aad leedahay master desistalalo nadiif ah way ii shaqaysay
WAAD KU MAHADSAN TAHAY AAD BADAN DANDI HADII AADAN ADIGA KUGU AHAYN WELIGEYNA MA AWOODNO INAAN KA CELIYO MAGAALADA SARE EE MAGAALADA MAHADSANID !!! 😀
Karlobell Joogsi dijo
Mahadsanid sxb, waxaad musbaarka ku garaacday madaxa ... aad iyo aad u daawashada fiidiyowyada isla wax isku mid ah yiri laakiin waxba ima tarin aniga, waxaad i siisay jawaabta hada haa hahaha mahadsanid
Ku jawaab Karlobell Paradas
GRADE LOBITOOO¡¡¡¡¡¡tb way ii shaqaysay
Ku jawaab ricardo taibe parraguez
Aad baad u mahadsantahay daandiii
Ku jawaab Rosi
dhibaatadaydu waxay la mid tahay dhammaan kuwii hore oo dhan. Ma aqaano sida loo sameeyo shaashadda dusha ka baxda
Xaaladdayda waa Huawei P 8 lite mana ii oggolaanayso inaan ka takhaluso isugeynta shaashadda ee aasaaska u saameeya, maskax ahaan, WhatsApp, sidaa darteed loo baahan yahay.
Caawinaad kasta waa la qadarin doonaa
Ku jawaab iñigo
Haye, mahadsanid, faalladaadu waxay ahayd mid wax tar leh haddii ay run tahay in arjiga uu yahay midka daaqadahaas dhigaya mana ogolaanayo rukhsadaha in la bixiyo
Aabe yanky dijo
Aad baad u mahadsantahay. Ka tirtirida sayidka nadiifka ah ayaa sidoo kale ii shaqeeyay. Waxaad tahay MASTER 🙂
Ku jawaab Aabe yanky
Mahadsanid ma aanan aqoonin sida loo xalliyo dhibaatadayda iyo haddii ay runtii tahay sayidkii nadiifka ahaa ee i xannibey
I caawi fadlan tijaabi wax walba illaa aan ka qoro taleefanka gacanta, ka tirtiro nadiifi Master laakiin wali iima oggolaaneyso inaan si dhab ah u siiyo oggolaanshaha WhatsApp xal kasta.
Aad baad u mahadsantahay Dandiiii .. Waan waalanayay, maxaa yeelay dhamaan fiidiyowyada aan ku arkay youtube-ka iyo waxba .. aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada !!!!
Dhibaato isku mid ah ayaa i haysata ma heli karo ogolaanshaha watsap ma helayo astaamaha aad ku muujineyso fiidiyaha waan waalanayaa
Mahadsanidiin Dandi waa hubaashii sayidkiisa nadiifka ah, waa inaan faallooyinka ku ridnaa dukaanka ciyaarta
Laacib 'Claudia plachicoff' dijo
Dandy. Weyn !!! Samee taas. Qabiil Desistalen oo waxkasta oo aad haysato nadiifin ahaan ah. Waa sixir. Dhibaatadii way dhammaatay.
Ku soo jawaab Claudia Plachicoff
Aad baan ugu mahadnaqayaa asxaabtii ka faalloodey: Dandi iyo gaar ahaan Claudia, oo sheegtey arrinta nadaafadda, kiiskeyga wuxuu ahaa ES File Explorer, haddii aysan adiga ahayn, xaqiiqdii weligey ma xallin doono dhibaatadan yar laakiin weyn !! Salaan badan asxaabta fagaaraha!
HADABA DANDI, SIDEE AYAAN Uga SOO SAARI KARAA MASTAXA NADIIF AH ???
Aad baad u mahadsantahay Dandi, taleefankaygu wuu dhibkan lahaa waanan hagaajin kari waayey, waxaan fidiyey sayidkii nadiifka ahaa iyo dawadii quduuska ahayd… SalU2s… José Miguel.
Jawaab José Miguel Jara Díaz
AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY, WAAN ISKU DAYAY WAQTIGA WAQTIGA, WAANA UGU DANBAYNAY IT
Ku jawaab gargaarka
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday BIG DANDI.
Kiiskeyga, dhibaatada waxaa lagu xaliyay adoo ku qasbay xiritaanka barnaamijka SMART ADMINISTRATOR, waxay u shaqeysaa wax u eg sayid nadiif ah, kaliya inay horeyba ugu timid asal ahaan s6
Thanksssss waad i keydisay hada wax walbana wey shaqeeyaan marki laga saarayo sayid nadiif ah.
Ku jawaab Ceci
WAAD MAHADSAN TAHAY WALAAL DANDI SI AAN U SAMEEYO MASTAXDA NADIIFKA AH OO XALIYO DHIBAATADA MAGAALADA BILAASHKA BADAN EE KHILAAFKA AH… WAA KUU WAYN !!
mahadsanid, barnaamijkaas fucking wuxuu ahaa dhibaatada
Shaashadda dusha sare ayaa iga dhigtay wadada qadhaadhka. Indhoolayaal badan kadib, kiiskeyga dhibaatada waxaa lagu xaliyay iyada oo la baabi'inayo barnaamijka CM Locker.
Wixii whatsaap waa inaan ka masaxaa codsiyada aan isticmaalo oo aniga way ila shaqeeyeen
Nolosha 43 dijo
Waxaan furey sayid cad oo la xaliyay ...
Waxaan arkay sida 4 casharro ah oo aan waxba fahmin ... aad baad u mahadsan tahay qof walba ..
Waxay sidoo kale igu waashay ilaa aan u istaagay hagaajinta softiweerka waana sameeyay kadibna dhibkii ayaa soo laabtay ,,,, xalkaygii waxaa bixiyay anigoo ka saarayo App-ka xawaaraha Du xawaaraha waana ku guuleystey waxaan rajeynayaa inuu sidan ku sii socdo, ,, waxay umuuqataa aniga waxay tahay in barnaamijyadaas xasuusta laga siideynayo ay yihiin dhibaatada ,, waxaan rajeynayaa inay ku caawiso
Charles Augustus dijo
Waad salaaman tahay Fernando, tan iyo Axadii 28-keedii waxaan qabay dhibaato shaashad ah. Waxaan daawaday fiidiyowyo qaar waxaan bartay waxyaabo cusub oo wanaagsan; laakiin ma xallin dhibaatada. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga si aad u tirtirto 'DO SPEED BOSTER' xallinta dhibaatada. AAD MAHADSANID
Ku jawaab Carlos Augusto
Tirtir wax kasta oo nadiif ah sayidkiisa, kuwa fayraska ka hor iyaga ayaan qabtay
fasax ka saar dhammaan
Habeen Wanaagsan Nilsa, waxaan dhibaatadan kala kulmay labo codsi oo kala ah Easy Taxi iyo Watsap, waxaan raacay tilmaamaha uu bixiyay Franc Ch arrintana waa la xaliyay. Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan u mahadceliyo Franc CH.
Ami isla waxbaa igu dhacay, ha welwelin, waxay leedahay xal, ma ahan in laga nixsho meel ka fog, maxaa yeelay waxaan heystaa cusbooneysiinta taleefankayga waa weyn yahay Aad baan u faraxsanahay, si aysan kugu dhicin adiga waa inay raadsadaan barnaamij soo jeedinaya wax ku saabsan rukhsadaha, Taasi waa, waxaa suurtagal ah inaad haysato barnaamij wax u dhimaya amniga taleefankaaga oo leh khilaaf marka aad maareynayso xuquuqda rukhsadaha, waxaan soo jeedinayaa in laga saaro barnaamijka ama maareeyo rukhsadaha hal ama barnaamij kale, wax walboo waxay ahaayeen maxaa yeelay, waxaan rajeynayaa in taladaydu ay adiga kuufiican tahay waana la hagaajin doonaa = D
hello weyn waxaan helay xalka desistale clena master. ama codsi kasta oo kuu ogolaanaya inaad xoreyso xusuusta taleefanka .. markaad shaashadda hoose shaashadeeda ka soo muuqato waxaad helaysaa toobiye muuqaal ah .. waxaan rajeynayaa inuu kuu adeegi doono. Waxay qaadatay saacado in lagu gaaro .. laakiin durba waa 10 wax. chuca.cris27@gmail.com
Ma ii sharixi kartaa wax yar oo ka sii cad? Waxaan u maleynayaa inaad heysato xalka ...
Ku jawaab Hernan
Ma jirto waddo aan ku haysto qoraalka 4 waxaanan u maleynayaa inay ahayd markii aan rakibay Poquemon go .. marwalba wey shaqeyn jirtay .. hadda iima oggola in aan galo galabta.
Ku jawaab Teresa
Hello Teresa, ma awoodday inaad xalliso dhibaatadaada? Isla waxbaa igu dhacay, waxaan rakibay Pokemon Go waxaanan bilaabay inaan dhibaatada haysto.
kuwa pokemon-ka leh waa inay curyaamiyaan barnaamijyada dibedda ee amniga gudahooda
Ku jawaab jua
salaan, waan isku dayey oo waan kari waayey. Waxaan dib u cusbooneysiiyaa taleefankayga si aanan u haysan master nadiif ah ama wax walbana waxaan wali haystaa dhibaatada ah inaysan ii oggolaan doonin inaan isticmaalo gps been abuur ah iyo pokemon. Waxaan isku dayaa inaan ka hawl geliyo goobaha oo badhanka pop-up-ka ee arjigan ma shaqeynayo.
Ami waxay ii shaqaysay aniga oo kala diraya sayidkii nadiifka ahaa
Gabdho mahadsanid, waxay ii shaqeysay aniga oo tirtiraya mastar nadiif ah kun mahadsanid faallooyinkaaga
Ku jawaab Mari
WAAN KU BAAHAN YAHAY, MA AQOON SIDAN LOO XALIYAY. Waxaan u maleynayaa inay dhamaantood kubilaabeen rakibidda PRISM laakiin ANIGU AYAAN FURIN IYO QAADKA KHUDBADDA DHIBAATOOYINKA WELI WAA. WHATSAPP MA HELI KARTO IN LA XIRIIRO AMA AAN DARSAN KARO SAWIRO. SAX AH
Kaliya iska fogee Masterka nadiifka ah ee ay ii shaqeysay mahadsanidiisa Dandi
Waxaan ku hayaa dhibaato la mid ah tan aad fadlan haddii aad taqaanid sidaad iigu tidhaahdo meesha ka saar macno darradaas
Waxaan furey Nadiif Master oo dhibaatadi waa la xaliyay. Aad baad u mahadsantahay
Ma haysto Master nadiif ah laakiin waxaan haystaa dhibaatada, ma jiri karaan barnaamij la mid ah oo sababa isku dhac isku mid ah?
Waa la qabtay! Waan kala diray DU SPEED BUSTER waana la hagaajiyay. Mahadsanid
Aad u dijo
Haddii aan furey dhammaan haha ​​runtii waan quusanayaa 2 maalmood batayando iyo alfiiiiiin dhammaan solusionado
Jr La Dhaqmay dijo
Iima oggolaaneyso inaan ka saaro xoojinta xawaaraha DU, sidee baan yeelaa?
Jawaab Jr Pareded
Dandi… kun thanksssss Waxaan rabay inaan saxo isdhaafka nacasnimada 6 saacadood… hadana markaan aqriyay taladaada waxaan iska fogeeyay master nadiif ah wayna shaqeysay …… .mahadsanid mahadsanid
Aad baad u mahadsan tahay .. Dandi taladiina ka saar masiirka nadiifka ah ee dhibaatada leh iyo dhibaatada isku soo duubnaanta nacasnimada waa la xaliyay mahadsanid ...
Waxaan ahay dhibane kale oo arintaan ah tan iyo markii aan rakibay Samsung Gear. Waan furey arjiga oo badh ka mid ah codsiyada wali ma shaqeeyaan sababo laxiriira shaashadda nacaladda. Kani si loo bilaabo cutubka oo mar labaad wax walba loo rakibo, xanuun dhab ah oo dameerka ah.
Ku jawaab ortegajota
Waa inaan ka saarnaa dhamaan nadiifiyeyaasha.Laakiin ma jirto qaab lagu galo wasa ... dhamaadka
Waxaan hayaa ogeysiiska 4 mana awoodo inaan joojiyo shaashadda dusha sare, ma jirto dariiqa, ogolaanshaha arjiga i weydiisanaya iyaga ayaa u muuqda mid firfircoon, laakiin markaan tago shaashadda si aan u dhaho codsigu wuxuu isticmaali karaa makarafoon, farriimaha, iwm habka aan wax u kicin
Javier, sidaada oo kale, waxaan hayaa warqad 4 iyo 2 maalmood ka hor ah oo aan madax xanuun ku qabay laakiin waxaan ka quustay 5 daqiiqo ka hor barnaamijyada sii deynaya wanka iyo booska. Sida sayid nadiif ah. Du kordhinta Du batery .. CM qufulka oo sifiican ayaan u awooday inaan isticmaalo whatsApp iyo Facebook messenger. .. waan waalanayay .. !! Haddii wax kaa caawiyo inaad wax xushmeyso .. !!
Ku jawaab Ruth alcarraz
Waxaan shalay sameeyay cusbooneysiinta bq aquaris m5-kayga dhibaatadana waxay bilaabatay inay dhacdo maanta, mana aanan ogeyn sida looga saaro, aqrinta faallooyinkaagana waan furey codsi sida super super ama shay ah wuuna igu sii dhacayay aniga, waa waxaa ii soo baxday in sidoo kale aan cadeeyay cm ama wax la mid ah, i cafi, ma aqaano sida loo qoro, waan ka quustay, mobalkayguna sifiican ayuu hada u shaqeynayaa, cusbooneysiintan cusub ee Android waxaa fiican inaan la helin codsi kasta oo nadiifin ah xq haddii aadan ka boodin shaashadda dusha sare
Jawaab David Martinez García
Waxaan haystaa Z5 Premium mana ii oggolaanayso inaan kiciyo iskudhafka dalab kasta, ikhtiyaarku wuxuu u muuqdaa cawl. Ma haysto sayid nadiif ah ama wax la mid ah, maxaan sameyn karaa? Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay
Faalladayda, oo aanan garanayn inaad akhriday, waxay igu tidhi aniga ayaa la ii xalliyay oo la tirtiray CM Locker, taas oo ay tahay inay ka timaaddo kooxda codsiga Master Master. Laakiin shabakadaha kale waxay ka hadlaan ka saarista Lux Lite, Twilights iyo barnaamijyo kale. Waxa kaliya ee aan ka fekeri karo ee aan kugula talin karo waa inaad mid mid u tirtirto codsiyada, gaar ahaan kuwa la xiriira amniga iyo keydinta, si aad u ogaato inaad furaha ku dhufatay iyo in kale. Ma aqaan wax intaa ka badan oo ku saabsan, waxaan garanayaa oo kaliya sida loo garaaco ninka indhoolaha ah.
Waad ku mahadsan tihiin dhammaan faallooyinkan maxaa yeelay runtu waxay tahay shaashadda dusha sare waxay kaa dhigeysaa inaad rabto inaad taleefankaaga derbiga dul dhigto.
Ku jawaab lian
Waxaan iska fogeeyay sayidkii nadiifka ahaa mana xallin laakiin markaa waan ka saaray batteriga dhakhtarka iyo shaashadda macruufka dhibaatada guud Ugu dambayntii mobilka anigaa iska leh, waad ku mahadsan tihiin dhammaan ra'yigiina.
Pfff ugu dambayn kadib codsiyo tirtirid dheer kadib taabashada la tilmaamay «Saqbadhkii». Codsi hoos u dhigaya iftiinka shaashadda (waad ogtahay habeenkii inaan indho belayno) haddana waxaan ogahay in kuwa dhibaatada noocan ah keena ay yihiin antivirus, kuwa hoos u dhiga dhalaalka, kuwa taleefannadayada gacanta ku habboon, oo hareeraha ka fiiriya mid ka mid ah ayaa noqon doona. Waxaan rajeynayaa in faalladaydu ay ku caawisay
Jawaab Rodrigo Colli
. Way ila shaqeysay hadda, su’aashu waxay tahay ... haddii aan tirtiro dhammaan barnaamijyadan, sidee ayaan ugu hagaajiyaa taleefanka gacanta?
Ku jawaab Carla Gonzales
Mid mid ayaan dib ugu soo celin lahaa, aniga oo hubinaya talaabo kasta oo ay wax u socdaan si fiican, ilaa aan ka ogaado midka dhibaatada ku haya kiiskaaga. Uma baahnid inaad ka maqnaato dhammaantood. Tusaale ahaan, wali waxaan isticmaalaa Clean Master Lite oo aan dhib lahayn.
Ma haysto barnaamijyo nadiifin ah oo loo rakibay sida sayid nadiif ah ama wax kale, laakiin waxaan heli karay xalka waana inay joojiyaan ikhtiyaarka ah in badhanka guriga, gadaasha iyo badhanka ay ka muuqdaan shaashadda, u gudub goobaha> shaashadda iyo asalka> hawlgalka hal gacan> guddi fure dhinac ah oo gab habkaas
Jawaab Joako Mariaca
Mahadsanid t .Taas ayaa noqotay wadada lagu saxo 4 maalmood kadib. Waxaan hayaa Xusuusin 4. Dejinta, dejimaha degdegga ah, shaashadda iyo sooyaalka, hawl hal gacan ah oo naafada dhammaan 3da ikhtiyaar
Mahadsanid Ana, midkastaba waxaan leenahay moobil inkasta oo ay isku xaalad tahay, xalka wuu ku kala duwan yahay iyadoo kuxiran terminalka. Kiiskeyga, waad ku mahadsan tahay faalladaada waxay ahayd badhanka sabeynaya.
Tag dhar fudud oo isla markaa isla markaana aad u xun oo dhib badan. Aad baad u mahadsantahay
Mahadsanid Ana waan ku jecelahay, bilo ayaan ku qaatay xogtan dusha ka ceyrsan, waxaan sameeyay wax walba si aan u cusbooneysiiyo softiweerka, warshada ayaa tirtirtay wax walbo wixii aad dhahdayna waxba iima tarin.
Mahadsanid! Dhibaatada ayaa i haysay, waan xallin kari waayey waxaana dib uga soo celiyey taleefanka meel xoqan, dhowr toddobaad ka dib mar labaad ayey igu soo dhacday (dabcan, markaan dib u soo celiyey dhinaca kooxda) waxaanan aad u quustay fekerka ah inaan bilaabayo ka xoqid
Samsung bug nooca 6 ee qoraalka 4.
Alexander Correa dijo
Mahadsanid saaxiib ka yimid Kolombiya, waxaan u socday inaan dib u cusboonaysiiyo qalabka ama aan ku burburiyo darbiga…. xusuusteydii galaxy 4 ayaa soo noqotay.
Jawaab Alejandro Correa
Mahadsanid Joako Mariaca kadib markii aad u dhibtootay waa furayaasha barakaysan ee sabbaynaya dhibaatada.
Salaan sxb waad mahadsantahay. kiiskeyga oo xaliyay liiska mahadsanid mahadsanid
U jawaab Peter
Dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin waxaan ku guuleystay inaan xalliyo dhibaatadayda is-dhaafsiga. .. waxay iga dhigtay isku dhac. CM qufulka .. sayid nadiif ah. . Du bateriga…. Waxaan ku sigtay inaan tuuro taleefankayga gacanta. Waxaan hayaa qoraal 4 waxaanan doonayay inaan ku tuuro dhulka muddo 2 maalmood ah. ... waxay ahayd wax laga xumaado. .
Waad ku mahadsan tahay Francisco inaad daabacday boostada oo sidan oo kale dhammaan faallooyinka waxay ku dareen hadhuudh bacaad ah si aan u xaliyo dhibaatadayda .. !!…
Haddii aad eegto, codsiyada si loo tirtiro xaalad kasta oo ka mid ah kuwa halkan lagu falanqeeyay aad bay u kala duwan yihiin, way ka duwan yihiin hal qof ilaa qof kale, in kasta oo ay u muuqato in Master Master-ka uu yahay kan soo ururinaya waraaqaha ugu badan. Waxay raacdaa in dhibaatada, halkii ay ka imaan laheyd codsi gaar ah, ay ka timaado goob kale, oo aanan si cad u aqoonsan karin. Joako wuxuu si maldahan u siinayaa, sababtoo ah kiiskiisa xalka ma ahayn in la tirtiro arji, laakiin aniga ima aysan ii shaqeyn, maxaa yeelay xulashooyinka qaabeynta ee uu sheegayo kuma jiraan Android-kayga. Sikastaba, aan sugno Sherlock Holmes si uu noo cadeeyo waxa qarsoon. Ruth, maahan in la tuuro mobilada, intaa ka hor waxaa fiican in aan ku soo cesho warshad, taas oo aan doonayay in aan sameeyo, iyadoo xanuun weyn uu iga jiro qalbigeyga, maxaa yeelay taasi waxay muujineysaa dib u soo buuxinta xogta, codsiyada, iwm.
Ma lihi mid ka mid ah codsiyadaas la rakibay imikana xitaa iima oggola in aan sawir xun sameeyo. Taleefankayga gacanta waa Samsung S5 wax dhibaato ahna horay umasoo marin hadana si lama filaan ah ayaan tan ku helay. Runtu aad bay u walwal badan tahay. Waxaan jeclaan lahaa in qof i caawiyo.
Waan furey sayidkii nadiifka ahaa dhibaataduna way sii socotey. Kadib ka tirtir amniga cm halkaasna misoi ayaa lagu saxay
Jawaab si elautormadrid
Waad ku mahadsantahay caawimada. Waxaan fidiyey Master Master
Sayidad, aniga waxay ila tahay in mawduucani dhammaanteen aan nahay hiwaayad oo midkoodna aan khubaro ku nahay. Guud ahaan, sida aad arki doonto, adigoo ka tirtiraya barnaamijkan ama arjigaas ayaan xallinnay dhibaatada, yaa garanaya sababta. Hadday taasi kuu cuntami weydo, waxaan soo jeedin doonaa saddex beddel.
1) Eeg faallada Joako. Isagu waa kan kaliya ee dhibaatada ku xaliyay si kale, waxaan qabaa.
2) Tag Settings / Codsiyada / Configure ama maamul barnaamijyada (tani waxay kuxirantahay nooca Android). Waa kuwan laba qaybood oo lagu ciyaaro: Ogolaanshaha Codsiga iyo Showga ku saabsan codsiyada kale. Qeybta Ogolaanshaha waxaad ku xakameyn kartaa barnaamijyada marin u heli kara Kaydinta, ama Xiriirada, ama Kaamerada (Waxaan ka helay waqti uun in codsigeyga Xiriirayaashu uusan heli karin Kaydinta, markaa waxaad leedahay laga yaabee in barnaamijkaaga Kaamirada uusan hadda awoodin inuu galo Kaydinta) . Showga ku saabsan codsiyada kale hubi in guud ahaan ay ku qoran tahay Haa inta badan codsiyada, taas oo ah waxkeeda.
3) Haddii dhammaan waxyaabaha kor ku xusan aysan kuu shaqeynaynin, badhanka nukliyeerka: taleefanka dib ugu celi isla xaaladdii markii aad iibsaneysay. In Settings / Backup, dhaqaajiso keydinta xogta iyo ikhtiyaarka soo celinta otomaatiga ah (si fiican, ugu yaraan LG-kayga), ka dibna dhagsii "Dib u dejinta xogta Factory". Waa xanuun dameerka, maadaama ay tahay inaad dib u gasho noocyo kala duwan oo dejin ah, laakiin waxay noqon kartaa sida kaliya ee taleefankaaga dib loogu soo ceshan karo (inuu khabiir nagu caawiyo mooyee).
Hooyada dhashay Android ...
Psole, waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga iyo gorfeyntaada, waxaad iga badbaadisay inaanan burburin taleefankayga gacanta, horeyba waan u xanuunsanahay waxaan qabaa samsung galaaxy s6 dhib walbana wey i siisay, laakiin waxaan gartay sida aad u sharaxday oo aad u diyaar ahayd, hadda riwaayad majiraan, waad dhacday….
Isla waxbaa igu dhacay, waan tirtiray sayidkii nadiifka ahaa wayna ii shaqeeyeen mahadsanid dhamaan
Ku jawaab Mradratra
Jonathan Says dijo
Ugu dambayntii waan xaliyay dhibaatadii, way i xanuunaysaa inaan mar labaad dib u bilaabay taleefanka dhowr jeer, mahadsanid
Jawaab Jonathan Sayes
Wax walba waan isku dayay oo waxba ma jiraan.
mobiilku waa cusub yahay.
Guys Waxaan horeyba u heystaa jawaabta saxda ah ee shaashadda si dhab ah iyadoo kani yahay dhamaadka. Waan furey sayidkii cken ka dibna dhakhtarkii baytariga laakiin sidaas oo ay tahay waxyaalaha qaar way igu sii socotaa laakiin waxaan youtube ku arkay fiidyow xalka ugu dambeeya leh. Arintuna waxay tahay inay awoodaan ikhtiyaariyada horumarka markay awoodaanna, waa inay ku bixiyaan sanduuqa ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Inactive apps' isla markaana markay halkaas joogaan ay raadiyaan arjiga dhibaatada iyaga siinaya, way taabanayaan sidan ayay u dhigeen mid aan shaqeyneyn. Kadibna waa inay kaliya dib u bilaabaan celceliska xaaladaha qaarkood si tan ay u dhaqan gasho. Kadibna waa inay aadaan codsiyada hagaajinta raadinta arjiga oo ay siiyaan dhammaan rukhsadaha. Sidan ayaa wax walba lagu xaliyaa ragga.
Horeba waan uga quustay barnaamijyadan isla isla waxbaa igu dhaca. Xal uma heli karo. Mana doonayo inaan ka soo cesho warshad x ciyaar aan horeyba aad ugu horumarsanaa, qof iga caawiya fadlan.
Waxaan ka fekeri karaa oo kaliya wixii aan horey u iri: gal Settings / Codsiyada / Configure ama maaree codsiyada / Ogolaanshaha Codsiga iyo dib u eegida waxa ku jira qaybtaan, gaar ahaan Kaydinta. Haddii shaki jiro, waxaa fiican inaad siiso rukhsad dheeraad ah.
Mahadsanid Joako taasi waxay ahayd xalkaygii ogeysiiskeyga mobile-ka 4. Waxaan seddex maalmood la halgamayey dhibaatadan ogolaanshaha ee barnaamijkeyga.
Ku jawaab Alonso
Joako mahadsanid 4. 4 maalmood kadib waxaan sidoo kale ku guuleystey inaan ku hagaajiyo Xusuus-qorkeyga 3-aad. In lagu habeeyay, goobaha deg deg ah, shaashadda iyo taariikhda, hawlgallada hal gacan, galaan oo barkinta XNUMXda ikhtiyaar… ..Ma u maleynayo inay ugu dambeyn go'an tahay.
Aad baad u mahadsantahay Daandi, Waxaan furey Nadiifinta Master-ka wuuna shaqeeyey! Waxaan ku sigtay inaan jeexjeexo taleefankayga gacanta kahor aqrinta faalladaada
Dandy; WADARTA MAHADSANID !!! sayid nadiif ah banaanka. Unugga Waayahay.
Ku jawaab Andrew
MILLLLLL THANKSSSSSSSSSSSSSS HORTA WAAN XALAY
KELIYA AYAAD TAHAY IN AAD KA HESHO PROTECTORESSS
Sideen ugu sameeyaa xperia z3-kayga?
Jawaab Ariel Ajhuacho
Xusuus-qorteyda 4, ma haysto barnaamijyo nadiifin ah oo loo rakibo sida sayid nadiif ah ama wax kale, laakiin waxaan heli karay xalka waana inay joojiyaan ikhtiyaarka ah in guriga, gadaasha iyo badhanka badhanka ay ka muuqdaan shaashadda, u gudub goobaha> shaashadda iyo asalka> hawlgal hal gacan ah> guddi fure dhinac ah oo gab gabintaas
Ku jawaab julio villasmil
Julio Villasmil, adigaa ugu fiican! Waxaan bilaabay inaan furo barnaamijyo badan iyo waxba. Ilaa aan ka yeelo waxaad tiri iyo wowwww markiiba waa la xaliyay. Mahadsanid!
Marita waxay dib u eegtaa faalladayda. Halkaas waxaan ku idhi sida looga takhaluso dhibaatadan si joogto ah maxaa yeelay barnaamij ka saarista ma baabi'inayso dhibaatada.
Xalkaaga waan awooday inaan ku xaliyo, ka dib markaan daawaday fiidiyowyo aan xad lahayn hal shay iyo tan kale, aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada
PT Teknoolojiyada (@Ttiyaayrista) dijo
Joako mahadsanid 4. 4 maalmood kadib waxaan sidoo kale ku guuleystey inaan ku hagaajiyo Xusuus-qorkeyga 3-aad. In hagaajin, deg deg deg ah, shaashadda iyo asalka, hawlgallada hal gacan, galaan oo barkinta XNUMXda ikhtiyaar… ..Ma u maleynayo in ugu dambeyn la hagaajiyay.
Jawaab PT Technology (@turiano_rosario)
Dew Terraces dijo
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa inaan ka tago hadhuudhkayga yar, malaha ma caawin karo qof walba, laakiin waxaan rajaynayaa inaan kari karo.
Waxaan hayaa Samsung Note 4, ama wax kasta oo ay ku qoran tahay, iyo daqiiqad ilaa daqiiqad kale ayaa la ii soo bandhigaayey dhibaatada shaashadda isku dul saaran, taas oo habka, ay tahay mid ka sii xanaaq badan. Marka la soo koobo, xalli isla maalintaas adiga oo ku dhaqaaqaya oo ku baaraya. Dhibaatadaydu waxay dhacday xilligii aan rakibay Prisma iyo Pokemon Go, oo ah codsi wax looga beddelayo sawirrada, haddii qof qaba taleefanka gacanta oo la mid ah aniga uu doonayo inuu rakibo, ha sameynin, fadlan hahaha
Hagaag, sidee baan u xalliyaa dhibaatada? Had iyo jeer waxaan haystaa Rasuulka oo furan, taasi waa in la yiraahdo waxaan helayaa xumbada sheekada, sidoo kale wixii aan si fudud u sameeyay waxay ahayd in meesha laga saaro, waxaan ula jeedaa, waxaan hawlgaliyay Rasuulka in yar, dhibaatadana waa la xaliyay. Gali dhammaan codsiyada meesha dhibaatadu ka dhacday waxaanan awooday inaan u oggolaado kamarad, kaydinta, iwm.
Sida iska cad waxaan ku gaadhay natiijadan anigoo damiyay dhowr codsi, laakiin waxaan rajaynayaa in haddii aad haysato taleefanka gacanta oo la mid ah kuwayga, fikradaydu way kuu shaqeyn doontaa.
Waad ku mahadsantahay aqrintaada 🙂
Jawaab ku sii Rocío Terrazas
GUYS HA KU WAALAN INA AY KUU SAMEEYAAN APPAN AMA KU DHAFANAYA APP-KA. U fiirso faallooyinka hore ee aan soo galiyay, waxaa jira qeexitaan sida loo xalliyo mushkiladda qeexan, INTA AY QAADAYAAN APP AMA KALE KALE WUXUU XALAYAA WAKHTIGA LAGA DIBNA MARKA AYAAD HELI DOONTA DHIBAATADA. XALALKEYGA Waxaan KU SIFDAYSAA SIDA LOOGU SAMEEYO CODSIGAN SI AAD UGU SAMEEYSID IN AAD KU SIISO OGGOLAASHA.
Dhibaato isku mid ah ayaan ku qabaa shaashadda weyn, waxaan haystaa warshad dib-u-dejin ugu sameeysaa mobilka waana igu sii socotaa. Ma isticmaali karo wax barnaamij ah maxaa yeelay waxay i weydiisaa rukhsad dadka aan la xiriiro ama kaydintooda iyo markaan rabo inaan siiyo, markale ayaan dib u helayaa shaashadda weyn, waana wax laga xumaado. Waxaan raacay talaabooyinka aad ku xustay xulashooyinka horumariyaha codsigana dib ayuu u howlgalay markaan dib u bilaabo mobilka.
Waxaan hayaa Xperia Z3, ma i caawin kartaa?
Subax wanaagsan Alvaro, waxaa jira waqtiyo markii aan dalabka ka dhigay mid aan dib u bilaabo markii aan u tago inaan siiyo rukhsadaha wali igagama tago maxaa yeelay barnaamijku wali wuu shaqeynayaa waxaanan dib ugu noqday howsha oo aan dhigay App-ka ma shaqeynin oo mar dambe ma aanan helin Baahida loo qabo in dib loo bilaabo mobkeyga mar labaad waxaa horeyba u jiray inaan toos ugu aaday goobaha, codsiyada, raadinta arjiga waxayna ii ogolaatay inaan siiyo dhamaan rukhsadaha. Isku day sidan oo kale, iskuday 2 jeer adiguna waxaad ii sheegaysaa haddii ay sidan igu soo baxday, aniga igama guul darreysan
Mahadsanid !!! Waxaan ka saaray seddexdii sanduuq ee 'hal gacan hawl' wayna shaqeeyeen !!!! Muxuu ku fashilmay dhanka android, samsung ama cidkasta ......
Waad salaaman tahay Caroline, habkaas waxaad kaliya ku xallin doontaa dhibaatada in muddo ah ka dibna kugu dhici doonta adiga oo wata app kale ka dibna mid kale. Raadi faalladayda oo aan ku sharraxayo halkaa sida looga takhalusi karo dhibaatadan si qeexan. Salaan
Waad mahadsantahay dandy, hadii aysan adiga aheyn, waan sii wadi lahaa dhibaatadaas
Aad baad u mahadsan tahay, si lamid ah ayay aniga ila shaqaysay
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada. Waxaan haystaa mastar nadiif ah, oo taleefankayga gacanta ayaa caadi ku soo noqday.
Naty Liz Cantuna dijo
Ka qaadida bateriga du iyo sayidkiisa ayaa xaliyay dhibaatada… Hore ayaan u waalanayay.
Jawaab Naty Liz Cantuña
Waxaan hayaa qoraalka 4 iyo shaashadda iyo asalka (joojiya saddexda ikhtiyaar) ayaa sax ahaa, maanta waxay ahayd maalin cabsi badan
Waan damiyey ikhtiyaarka, markaa wuu sii naafoobayaa, waxay ii muuqataa aniga oo maya oo markaan rabo inaan ogolaado waxaan dib ugu laabtaa qaabeynta markii aan raadiyana waxay ii sheegtaa in aan la awoodin markaa maxaa yeelay ima siinayso ogolaanshuhu waa sida meertada….
Jawaab Joshua marin castro
Xaaladdayda, waxay ahayd inaan daqiiqad ka saaro rukhsadaha Badhanka Badbaadiyaha iyo ka dib markii barnaamijyada la rakibo, mar kale sii wax walbana wax waliba way soo shaqeeyeen dhib la'aan. Waxay ahayd mid aad waxtar u leh inaad aragto faallooyinka. Aad baad u mahadsan tihiin dhamaantiin.
Waxaan haystay shaashadda oo ma furi karo oo haweeney ayaa tiri waxaan baabi'inayaa Du Master waana sameeyay waana hagaajiyay taleefanka gacanta. Nasiib wanaag maxaa yeelay waxay ahayd madax xanuun
Ku jawaab marta antunez
Hagaag, ma haysto sayid nadiif ah ama barnaamij la mid ah mana saari karo. Liisaska casharradaasi aniga ima shaqeeyaan. Muxuu yahay shibis android. Waxaan ahay quus iyo waqti lumis
william carillo dijo
Horey waan u xaliyay dhibaatadii, waxay ahayd dalabkii xoojinta xawaaraha Du ee jidka ku jiray. waad ku mahadsantahay sheekadan muhiimka ah
Ku jawaab guillermo carrillo
Dadyohow, ka dib markii aad sameysay mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka aad soo jeedisay, waxa kaliya ee suurtagashay in lagu furo isweydaarsiga caanka ah iyo codsiyada ogolaanshaha ee aan la siinin ayaa ahaa… dib u soo celinta Samsung S7-dii meelihii ugu horreeyay. Dib-u-rakib barnaamij kasta oo lagama maarmaan ah ka dib ruqsadaha u dhigma. oo aan ku soo ceshado dhammaan xogta aniga oo adeegsanaya Koontadayda Samsung iyo Google ,,, 3 toddobaad ayaa laga soo wareegay tan iyo markii ay gacmahayga yimaadeen laakiin markan waxaan ku guulaystay in aan si joogto ah uga shaqeeyo !!!!
Ku jawaab MaGaRodBokan
Tan iyo markii la cusbooneysiiyay qoraalka 4 maalmo ka hor, maanta markii aan rakibo codsi isboorti (muddo dheer waxba ma rakibineysay) waxaanan helay daaqad leh "shaashad dusha laga ogaan karo, tag goobaha / codsiyada oo dhaqaaji ……… But "laakiin ma ogola in la sameeyo waxa ay leedahay.
Kaliya aniga ayey igu dhacday aniga iyo galleryka.
Dhanka kale, wathsapp ima is waafajin maadama qaladkani soo ifbaxay.
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa mid lagu daray Mid wax la mid ahna aniga ayey igu dhacaan, laakiin si toos ah uma saareyso wax xulasho ah oo dalab ah.
Waxay ii soo dirtaa Settings_ Wax ka qor arjiyada kale ka dibna iima oggola inaan wax ka beddelo HAA / MAYA.
Waxaan dib u bilaabay mobilka kadibna dhibaatadu way tagaysaa daqiiqado yar laakiin ma heli karo wax: sawir, goobta, dukumiintiyada ...
Aniguna ma haysto wax app ah. Waan u xiisay nadiifinta ama kabaha taleefanka.
Waxaan rabaa caawimaad, mahadsanid
Xaqiiqdii, waa Beesha Master ee eedda leh.
John Calderon dijo
hadii sayidkaas nadiifta ah ay dhibaatadu tahay ... ka sifee oo hadda waxaan isticmaali karaa kuwa weydiista rukhsaddaas barakaysan ...
Jawaab Juan Calderon
KA SII BAX MASEERKA NADIIFKA AH MARKII AY JIRTAY IN DHAMMAAN DHIBAATADA AY SOO bilaabantay, Lakin WELI CIYAARAYAASHA HADA MA AHAN IN AANAN SHAQO QABAN, OGOLAASHO WIXIIBA, MA ISTICMAALI KARO TELEFOONAYGA SUUQA AH ……… .. CAAWIMAAD !!!
Jawaab Cynelle Yvonne Lebron Rosado
Dhowr maalmood ka dib markaan isku dhejiyay aniga oo isku dayaya inaan xalliyo dhibaatada shaashadda ee dhammaan barnaamijyada, oo ka dhigaya kumbuyuutarka wax aan faa'iido lahayn 80% ... si fiican, waxa aan sameeyay waxay ahayd GELISTA SHAQAALAHA IYO DIB-U-HAGA-KA-HOR-SAARKA Kadibna waan furey the Waxaa jira 3 ikhtiyaar halkaas ... markaa dib u bilaw kombiyuutarka oo qlli gali whatsaap ama mid ka mid ah codsiyada aan la isticmaalin shaashadda digniintuna mar labaad ayey soo baxday waxaanan ka siiyay barnaamijyo isla barnaamijkan 'yyyyy' halkaas waxaan ku dhaqaajin lahaa oggolaanshaha mid kasta ...
Way ii shaqeysay ... nasiib wacan dhammaan
Jawaab Alci karina
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan hayaa Samsung Galaxy S5 waxaanan leeyahay dhibaato la mid ah soo galida wasakh, Gallery iyo codsiyo kale laakiin waxaan ka saaray sayidkii nadiifka ahaa dhibaataduna way sii jirtaa in laga yaabo inaan ahay qof quusta. Sideen u xallin karaa mahadsanid kahor.
U jawaab Eli
Qofbaa i caawiya Ma aqbali karo rukhsadaha WhatsApp ... Ma haysto wax codsi ah oo aan wax ku wanaajiyo, wax walba kama haysto teleefoonka gacanta, waxaan haystaa galaxy s6.
Ku jawaab Yepiz.
Qaali, waxaan hayaa XUSUUS 4, waan waalanayay, kiiskeyga iyo mahadsanidiin waxaa lagu xaliyay iyadoo la curyaamiyay dhinaca bidix ee shaashadda ka muuqda!
Dejinta-shaashadda iyo sooyaalkii - hawlgal hal gacan ah - guddi fure dhinac ah (ka jooji doorashadan badhanka kore)
Nasiib wacan qof walba! Iyo samir!
Dhibaatadu hadda waxay ka jirtaa xiriirada, lambar kuma dari karo?
Wanaagsan, dhibaato isku mid ah ayaan qabay horayna way u shaqeysay, mahadsanid Yepiz
Jawaab Alexander Lopez Lira
isha.Qaybta fure ee fureysaa sidoo kale haddii xalalka kale shaqeyn waayaan ... waan sameeyay oo markale galab galabtii sawirka
Subax wanaagsan qof walba, mahad Erii_Pausini waxaan awooday inaan tirtiro codsiyada xun, sida soo socota:
Tallaabada N ° 1: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo codsiyada soo socda, waxaan ka soo dejiyey Uptodown inkasta oo ay ka soo dejisay playstore-ka.
2. Amniga CM
4. Qalbi Adkaan Trojan Killer
Soo dejiso xirmadan, tag goobaha oo hubi ikhtiyaarka: «Ilaha aan la aqoon».
Waxay sii wadaan inay ku rakibaan siday u kala horreeyaan mid ka mid ah tillaabooyinka (3) waxay raadinayaan fayraska oo barafoobaan ama baabi'iyaan iyaga oo ku cadaadinaya illaa ay xulashooyinka ka soo muuqanayaan iyo marka la rakibayo tallaabada ugu dambeysa (4) taasi waa tan gebi ahaanba baabi'in doonta fayrasyada iyo barnaamijyada xaasidnimada ah hal mar.
Waxay falanqeeyaan qalabka markii ay helaan fayrasyada la sheegayna waxay siinayaan ikhtiyaarka Dil.
Waxay markale fureyaan antivirus si ay udhameeyaan baabi'inta qashinka.
Waxay dib u bilaabaan oo ay tagaan
Jawaab Mauricio Palazzolo
Mahadsanid! ka saar sayidkii nadiifka ahaa wayna shaqaysay!
Ku jawaab bernarda
Waxaan ku xaliyay anigoo tirtiraya Twilight
Xalka kale ee suurtagalka ah, haddii ay leeyihiin shaandho iftiin leh (waxay nalka taleefanka ka dhigaya mid hoos u dhigaya nuurkiisa), waa inay damiyaan, ka dibna dhaqaajiyaan ama joojiyaan rukhsadda ay isticmaalayaan.
Waad salaaman tahay, qof ma i caawin karaa! Waxaan haystaa BQ E5s oo ikhtiyaarka Maareeyaha Codsiga ma khuseeyo. Ma aqaano waxa la sameeyo mar dambe, xitaa ma arki karo sawir, ama u soo gelin karo facebook ama u diro whatssap ama ficil ahaan wax. Mahadsanid iyo salaan
Ku jawaab Ainhoa
Waan ka saaray CM LOKER iyo CM Security mushkiladana waa la xaliyay.
Ku jawaab mjbc
Waad salaaman tahay, waxaan iskudayay qaababkan mana aysan ii shaqeyn, badhanka dalabka ee aan rabay in aan wax ka badalo ma uusan muuqan ama wuxuu ku soo baxay asagoo xiran, xalka igu kalifay inaan xaliyo dhibaatada shaashada dusha sare ayaa aheyd: Dib u habeyn ku samee dhammaan feylasha aan ku lahaa Taleefanka, sawirada, fiidiyowyada, muusikada, dukumiintiyada, qoraalada codka, wax walba, waxaana ku dhejiyay aalad kale si aanan u lumin wax macluumaad ah ama waliba kaarka SD isla markaana aan uga saaro kaarka Taleefanka mar la dhammeeyay iyo taleefanka oo aan lahayn nooc feyl ah waxaan aaday ikhtiyaarka ikhtiyaariyada waxaanan awood u yeeshay inaan wax ka beddelo dhammaan rukhsaddaha aan doorbidayo anigoon ka saarin codsi kasta, mar haddii rukhsadaha la beddelay, macluumaadka mar labaad taleefanka mana i siinin wax dhibaato ah oo ku saabsan iskudhafka.
Waxaan rajeynayaa in doorashadan ay kuu adeegi doonto !!!
Ku jawaab Selene Vélez
Way ii shaqaysay aniga oo kala diraya sayidkii nadiifka ahaa !!!!
Yashuuca kii saddexaad dijo
dad aan ku guuleystey inaan saxo !!!!
Waxaan la kulmay dhibaatadaas oo i weydiisatay rukhsad sababo la xiriira dusha sare ee blah blah blah… waxaa ii soo baxday in aan ku rakibay barnaamij had iyo jeer ku yaal shaashadda dusheeda… mid ka mid ah Windows-yada badan… Waan furey oo sooo !!! dhibaatada la xaliyay
Jawaab Joshua Tercero
Kaliya waa inaad garaacdaa arjiga sababa dhibaatada. Waxaan bilaabay inaan joojiyo in yar oo ka mid ah howlaha qorista codsiyada kale iyo dhibaatada la xaliyay. Xaaladdayda, waxaan naafo ka dhigay Cortana iyo Mobilgo (oo aanan garanayn waxa ay u dan leeyihiin ama aanan xiisaynayn). Marka hore khiyaanada ah in batteriga lagu dhejiyo habka keydinta si loo siiyo rukhsado aniga ii shaqeynayay, laakiin kaliya codsiyada Power Point iyo Telegram ayaa aniga ii shaqeynayay. Dulqaad iyo gab codsiyada leh ogolaansho inaad wax ku qorto kuwa kale. Nasiib!
Jawaab ku sii Silvia Gracia García
EasyTouch sidoo kale lama taageerin. Waxay soo saartaa cillad la mid ah tan Master Master
Waad salaaman tahay, waan curyaamiyey dhammaan isweydaarsiga (xitaa kuwa nidaamka ah) sida taleefanka lagu weydiisto mar kasta oo aan isku dayo inaan oggolaansho siiyo codsiyadayda, hase yeeshee weli ma aanan awoodin inaan bixiyo rukhsad mana shaqeeyaan, ma jiraa qof i caawin kara? Waxaan hayaa Samsung Note 4 oo leh Android 6.0.1
Runtu waxay tahay inaan iska fogeeyay dhamaan barnaamijyadii nadaafadda ama antivirus ee aad haysatay taleefankuna caadi ayuu kusoo noqday, waan sameeyay waana ay ii shaqeysay ...
Jawaab William Encalada
George Ungar dijo
Runtii ruuxii saaray sayidka nadiifka ah, waa indheer garad buuxda, u dhig lataliye, shaqaalaysii, maxaa yeelay kuwa kale xal uma helin, salaan kadib
Jawaab Jorge Ungar
Valvaro Fierro Nunez dijo
Qof walba subax wanaagsan.
Anigu waxaan ahay isticmaale Galaxy S7 ah, waxaan qabaa dhibaatadan, waxaan isku dayay dhowr xal oo lagula taliyay internetka, aakhirkii waxa i caawiyay waxay ahayd inaan kumbuyuutarka ku bilaabo qaab amaan ah; anigoo ku jira xaalad aamin ah, waxaan aaday qaabeynta iyo maareeyaha arjiga, ka dibna codsi kasta oo ku jira xulashada rukhsadaha, waxaan awood u yeeshay inaan wax ka beddelo iyadoon wax dhibaato ah jirin; Ka dib markii dib loogu bilaabo kumbuyuutarka qaab caadi ah, rukhsaduhu waxay ahaayeen sidii loogu daayay xaalad aamin ah, iyada oo xalka dhibaatada la doonayo.
Jawaab Álvaro Fierro Núñez
Waad salaaman tihiin friends. hadday wax ka caawinayso iyaga something. ka tirtiro barnaamijka amniga ... sida sayidka nadiifka ah ama kuwa kale ... way i caawisay ... salaan
Malag Jibriil dijo
Waad salaaman tihiin, marka hore aad baad ugu mahadsan tihiin kaalintiina wax ku oolka ah.
Runtu waxay tahay in waxa sida weyn ii caawiyay ay tahay iyadoo la tirtiraayo barnaamijkan ama barnaamijkaas, inay mar kale si fiican u shaqeysay.
Xaaladdayda, barnaamijku wuxuu ahaa mid aan soo dejiyey si aan wax uga beddelo codka. Sidaad u aragto, wax shaqo ah kuma lahan amniga mana garanayo sababta cadaabta barnaamijkan u doonayo inuu u noqdo aagga hore, laakiin markii aan iska fogeeyay, wax walba caadi ayey ku soo noqdeen.
Xitaa iyadoo sidaas ah, aad baad ugu mahadsan tihiin tabarucaadka.
Ujawaabi Angel Gabriel
Maxaadse ku ilaalisaa taleefanka mahadsanid
Runtii beel ahaan, faallooyinkaagu waxay ahaayeen kuwo waxtar badan leh in la bilaabo ogaanshaha waxa khaladku jiray xalkuna waa in la SOO CELIYO CODSI KASTA OO KU HELAYA XUSUUSIN NADIIF ah kiiskeyga wuxuu ahaa Launcher Hello, dadka kalena sayidka nadiifka ah ama codsiyada noocaas ah ayaa si fiican u falanqeynaya waxay leeyihiin mid sababa dhibaatadaas
Uma shaqeyn sidaas oo kale iyo zde blade v7 waadna arki doontaa, waxaan isku dayay siyaabo badan oo kaliya tan shaashadda ayaa soo baxaysa, ma i caawin kartaa?
Waad ku mahadsan tahay hanad Master Master!
Ku jawaab Marga
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa mooto g 3, android 6.0.1 iyo ikhtiyaarka Maareeyaha Codsiga ma muuqdo mar aan galo goobaha. Horeyba waan iskudayay wax walbana garan maayo waxaan sameeyo.
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, dhibaato isku mid ah ayaan ku qabaa shaashadda dusha sare laakiin laambada 'Huawei' L03, xitaa iima oggolaaneyso inaan galo xiriiriyahayda whatsaap ama wax uun! I caawi !!
KALIYA TIRSII DHAMMAAN CODSIYADA AAD HAYSATO SI AAD U SOO DHAWEEYSO NADIIFO NADIIF AH AMA KA TIRSAN VIRUS-KA WAA TII UU KA DHEX GALIYAY TELEFOONKAAGA I SHAQAYSAN.
Jawaab ku bixi MARCO PEREZ
Xalka kaliya ayaa ah in laga tirtiro dhamaan barnaamijyada wax duuba, ama barnaamijyada badbaadiya batteriga ee ka yimaada soo saare kasta, xitaa antivirus
Jawaab JULIO CESAR AVILA ASAN
Rocío Saal dijo
Dhibaato weyn ayaan qabaa ... Waxaan rabay inaan kiciyo goobta khariidada ee WhatsApp waxaanan ku dhammeeyay jahwareer markii aan riixayo dookhyada dib-u-dejinta ... Hadda waxaan u baahanahay inaan joojiyo shaashadda dusha sare si aan ugu soo laabto barxaddayda, xiriirada WhatsApp ka oo gala Skype iyo codsiyada kale laakiin ma aqaano meesha ay ku taal iyo sida loo sameeyo. Waxaan ka baqayaa inaan markale qalad kale sameeyo. Xaaladdayda waa Moto x jiil labaad iyo Android 6.0
I caawi fadlan
Jawaab ku sii Rocio Saal
HELLO ROCIO SAAL OO KELIYA UNINTEL FARIIMAHA AAD KU HAYSATO Telefoonkaaga Taleefoonkaga Oo UU U Adeegsanayo Nadiifinta iyo Ka-tirtirka VIRUS-yada KAA CAAWIN doona kuna shaqeysiin doona dhammaan rukhsadaha AAMI ee aniga IGA SHAQEYSTAY
HADDII AY SHAQEYSATO DHAMMAAN APPOLKA AAD LEEDAHAY SI AAD U NADIIFATO TELEFOONKAAGA CELL AYAA U AKHRISAA SIDA VIRUS OO AY KUGU JOOJISAA APPO BADAN SI AAD U HESHO OO HADDA SII SHAQAYSA HADDII AAN ISTICMAALI KARO TELEFOONKA WELIGAY MAHADSANID.
WAAD KU MAHADSAN TAHAY HADDII AY SHAQAYNAYNAYN TAHAY CODSIYADA AAD KU QAADANAYSID IN AAD KA HELI KARTO MASKAXDA VIRUSES
Alfonso Javier Diez Lopez dijo
Kaliya waxaan ku xaliyay anigoo tirtiraya Twilight
Jawaab Alfonso Javier Díez López
Ciise Adrian dijo
Ami waxay ii shaqaysay aniga oo masaxaya pokemon go
Maxaan u haysan waayey mid ka mid ah barnaamijyadooda kale?
Kaliya tirtir pokemon go wax walbana si fiican ayey u shaqeeyeen
Jawaab Ciise Adrian
lola andre dijo
Ku jawaab lola andré
Francisco, habeen wanaagsan, Waxaan u maleynayaa inay tahay inay halkaas habeen ku ahaato Barcelona waxaanan kaaga mahadcelinayaa ka hor dareenka iyo soo jeedinta aad siisay dhibaatada aan faahfaahinayo:
S6 Edge, waxaa jira waqtiyo taabashadu aysan soo jawaabin ... xoogaa waan sugayaa, waxay noqon kartaa 5 daqiiqo taabashaduna way jawaabaysaa; laakiin waqtiyo kale waxyar maahan, waa waxyar oo waliba shaashadda taabashada ayaa markale ka jawaabeysa… Maxay noqon doontaa sababta xalna ma jiraa?
Waa in la ogaadaa in dib u bilaabista, si kasta ha noqotee, aysan xallin dhibaatada, maadaama ay dib u bilaabi karto oo aysan ka jawaabin taabashada.
Waxaan idiinka soo qorayaa Caracas, Venezuela aad iyo aad ayaanan ugu faraxsanahay haddii aad iga caawin kartaan MAHADSANID
Jawaab Vicente Reverón
Waxa kaliya ee aan idhaahdo waad mahadsantahay tirtirida barnaamijyadan dhibkiina waa laxaliyay
Ku jawaab kenyita
Ku jawaab carlaaa
Waa inaysan ka takhalusin wax APP ah oo u maleynaya in haddii ay sidaas sameeyaan, markaa markay mid kale rakibayaan dhibaatadu way soo noqon doontaa. xalka saxda ah waa in la xoojiyo ikhtiyaarrada horumariyaha (tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la riixayo nambarka dhismaha dhowr jeer) xulashooyinkaasna waxaa jira mid dhahayo si aad udhaqaajiso shaashadda 'Screen Overlay', wax intaa ka badan. Waxay awoodi doonaan inay hagaajiyaan dhibaatadaada iyaga oo aan ka saarin barnaamijyadooda.
Jawaab ku sii Marco Mancilla
hello waxaan haystaa j7 waxaanan raacay talaabooyinka sida loo joojiyo dusha sare walina waxaan helayaa fariin oraneysa waxaan hayaa shaashad shaashad ah, maxaan ku sameeyaa kiiskan?
Mahadsanid !!! Waxaan furayay Master-kii nadiifka ahaa waan xaliyay dhibaatadii.
WAAD KU MAHADSAN TAHAY, UGU DANBAYN WAAN QAADAN KARAA !!! Tilmaamahaani:
Fadlan salaan, waan ogahay inay arintu duug tahay laakiin kuwa cusub ee arkaa inay tani tahay xalka arintooda madaama ay igu dhacday Samsung s6 ama s5 waxay aadayaan goobaha - Maamulaha Codsiga markay baxaan waxay arki doonaan sadex qodob dhinaca bidix ama erayga wax badan guji halkaas oo ka xulo codsiyo halkaasna gacanta ku baabi'in kara mid mid oo ka saaraya buluug ilaa cawl astaan ​​iyo voila oo App kasta ayaa u habeyn kara sida ay nasiib u rajeynayaan.
Haddii aad haysatid mastar nadiif ah oo aad ka saareyso aniga ayey ii shaqeysay.
Waa hagaag fadlan i caawi, waxaan isku dayayaa inaan soo dejiyo whatssap laakiin markaan weydiisto rukhsadaha waxay ii soo dirtaa si aan u joojiyo dusha sare laakiin markaan tago si aan u baabi'iyo dalabka whatssap ma muuqdo ... maxaan sameyn karaa? Way caawineysaa, aniga ma awoodin inay si sax ah u rakibaan ... ...… .. ???????
Jawaab ku bixi STEPHANIE MADRID
Waxaan haystaa dhibaatada ah in microphone-ka whatsap uusan ii shaqeynaynin, wuxuu ii sheegayaa kan yaa i caawiya, wuxuu ka yiraahdaa isdhexgalka shaashadda, waxaan sameeyay talaabooyinka oo dhan waxna ma raaco dhibaatada.
Jawaab Eliecer Becerra
Si daacadnimo ah, fiidiyowgaaga ayaa ku wargelinaya waxa ay tahay, ma caawinayso xallinta dhibaatada. Ku dhowaad toban daqiiqo ayaa khasaaray.
Waad salaaman tahay ma i caawin kartaa fadlan, waxaan haystaa j7 2016 waxaanan si lama filaan ah uga soo degsanayaa waraaqo ka mid ah cm qufulka shaashadda iyo shaashadda iyo astaamaheeda gabi ahaanba waa la beddelay oo dhammaan toobiyadii ay ku dhex jirtay waa la tirtiray kuwii jirayna waa la sameeyay Rafaa, ma garanayo waxa ay qabato, mar hore ayaan iska fogeeyay qaar ka mid ah codsiyada gidaarka ee aan haysto iyo wax aan jirin, ma garanayo sida loo saxo. Markay taasi soo baxday, waxay ii sheegtay inaan isticmaalo taabashada ama biraawsarka taabashada bilowga ama wax la mid ah, kaliya waxaan ku dhuftay mid ka mid ah 2 maxaa yeelay ma geli karin shaashadda taasna way soo baxday.
Waad salaaman tahay Elena, waa inaad gashaa codsiyada Settings oo riix midigta sare halkaasoo ay yaalliin seddex dhibcood ama erayga More dhagsii codsiyada Default oo xulo Start Toucwiz
Ma shaqeyneyso Ma saari karo sawirka sare
Ku jawaab Núria
Maxaa dhacaya haddii aan joojiyo iskudhafka shaashadda dhammaan codsiyada oo ay ku jiraan kuwa nidaamka oo aysan wali ii oggolaanayn inaan oggolaado rukhsadaha, maxaan sameeyaa?
Jawaab Manuel Maneiro
Hello Francisco, waad ku mahadsan tahay fiidiyowgaaga, wuxuu ahaa mid aad u faa'iido badan, si kastaba ha noqotee waxaan haystaa motorola G2 iyo inkasta oo aan ka saaray rukhsadda in aan dib u qoro dhammaan codsiyada ka muuqda liiska markii aan galayo liiskaas (xitaa waan hubiyay nidaamkii markii hore qarsoonaa) Ma awoodin inaan ogolaansho siiyo whatsapp si aan ula xiriiro xiriirada, makarafoonka, kamarada ama waxkastoo ... hadaad wax fikrad ah hayso sidaad ii caawin laheyd, waan ku qanacsanahay!
Jawaab Ana María Alvarez
Waan curyaamiyey dhammaan isweydaarsiga dhibaataduna way sii jirtaa. Wuu fasaxay dhammaan rukhsadaha whatsapp-ka aniga. Maxaan sameyn karaa?
Wax walba waan u sameeyay si talaabo talaabo ah laakiin waxaan rabaa inaan ogolaansho siiyo WhatsApp mana garanayo waxa la sameeyo gabi ahaanba way i caawinayaan
Waxaan haystaa S7 ka dib markii aan uga tagay xuduudaheeda warshadeed oo aan u gudbiyo macluumaadka keydka ah, isla waxbaa igu dhacay. Waxaan si fudud u galayaa Settings, ka dibna Codsiyada, ka dibna Maareeyaha Codsiyada oo bidix xagga sare ah ikhtiyaarka inbadan oo aan doortaa Codsiyada laga yaabo inay muuqdaan ..., oo aan joojiyo amniga 360 iyo amniga amniga 360. waana diyaar. Waxay noqon kartaa mid si fudud u shaqeyn karta wixii antivirus ah iyo Go. Xalliyay
Waxaan heystaa dhibaato aad u weyn mana aqbali karo rukhsadaha wahtsapp waana kala noqday dhamaan rukhsadihii aan kuheli jiray barnaamijyada kale ee aan soo dejistay waxaan isku dayay waxkasta oo aan halkaan aado xq nc halka kale oo aan miciinsado waxaan isku dayay inaan barnaamijka ka joojiyo barnaamijka barnaamijka mana jirin iibiyahaas yar ayaa ii muuqda aniga mj waxaan u maleynayaa inaan jeclaan lahaa inaan taleefankayga ku tuuro qashinka
Mahadsanid sxb !!! Aad bay ii caawiyeen !!! Waan la soo bixi kari waayey waxna, ilaa aan bilaabay inaan wax walba iska daayo! Waa inaad mid mid u tirtirtaa oo aad tijaabisaa midka dhaliya isku dhaca, waana sida ay u shaqeysay! Aad baad ugu mahadsantahay fikirkaaga !!!
Laura Cabellos (@_raro) dijo
Waad salaaman tahay, waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo waxyaabaha aad ka kooban tahay, waxay naga caawinayaan inaanan bixin qiimo sare si aan u xallino dhibaatooyinka qalabkeenna waana mid la jeclaan karo. Hadda, waxaan ku qabaa isla dhibaatadan instagram, gaar ahaan boomerang, waxaan isku dayay inaan sameeyo waxa ay tilmaamayaan laakiin kaliya ima tusayso dhammaan codsiyada kombiyuutarka, instagram, boomerang iyo whatsapp ayaa iga maqan, ma garanayo sida si loo saxo. Taleefankaygu waa cusub yahay, hal toddobaad, waa ZTE daab A310, ma lagama maarmaan baa in la isticmaalo dammaanadda?
Jawaab Laura CabellosdeAura (@_roja)
KA DAMBEEYA MAALMAHA DAROOD EE ISKU DAY WAX KASTA, DETACH DU SPEED BOOSTER OO LOOGU TALAGALAY CID KA SOO BAXDAY MAGAALADAN NATIIJADANA LOO BAAHAN YAHAY. MAHADSAN ROLANDO, WAANU JOOGNAA TOCAYO.
Waad salaaman tihiin horumariye, ma jiraa qof yaqaan sida loo dhagaysto filimada ku jira codka Latinka ah, dhamaan filimada aan soo arkay waxay la socdaan codka ku jira «Isbaanish» ka yurub; Haddii ay jirto qaab lagu dhagaysto iyaga oo ku hadlaya Laatiinka Isbaanishka waan kugu mahadinayaa… salaan kadib
Wow, haddii aad dhibaatooyin ku qabtid shaashaddan shaashadda ah, ma aanan helin dalabkii iga hor istaagay inaan dalbado rukhsadaha oo aakhirkii ay noqotay "ES File Explorer" oo ah meesha aan "ES Swipe" ku hawlgalay; Waan furey oo voila! ?
Waxay ahayd inaan ka rido ES Explorer, dhibaatadana waa la xaliyay
Xalku waa mid aad u fudud:
waa inaad cadeysaa barnaamijyada aad ka soo degsatay dukaankaaga ciyaarta
oo ka saar kuwa ugu dambeeya oo tijaabi rukhsadaha dusha. waa imisa
Ku jawaab shaqo
Waxaan haystaa jiilka 8aad ee Huawei P1 lite oo maalmo yar ayaa laga joogaa taas oo kuxiran waxa aan isticmaalo, iskudhafku wuu soo baxayaa. Laakiin gaar ahaan maanta, tan iyo markii aan adeegsaday wallapop si aan wax ugu soo daabaco, ma ii oggolaan laheyd inaan sawir dhigo sababo laxiriira iyo wax aan taabtay awgood, markaa waxay igu faragelisay WhatsApp oo hadda xiriiriyayaashu waxay ku soo baxayaan tirooyin aan magac lahayn mana ii oggolaaneyso inaan sawirro dhigo ama duubto cajalado… Caawimaad !!!
William Bermudez dijo
Dhibaatadaas oo kale ayaan qabay ugu dambayntiina waxaan ogaaday in arjiga kale ee bixiya dhibaatadaas shaashadda dusha ka saaran yahay uu yahay arjiga ES FILE EXPLORER, dhibaatadana waxaa sababa ES FILE oo keenaya arjiga ES WIPE oo si otomaatig ah loo hawlgaliyo marka la rakibayo ES FILE Markaa adiga waa inaad furataa ES FILE, dhagsii badhanka bidix ee kore, barkinta ES WIPE dhibaataduna way dhamaatay. Waa inaan sheegaa inaan horeyba uga careysnaa dhibaatadaas
Jawaab Guillermo Bermudez
Aad baad u mahadsantahay, waxaan ku sigtay inaan taleefankayga ku tuuro gidaarka. Kaliya iska nadiifi maareeyaha Faylka wax walbana si caadi ah ayey u socdaan.
Waxaan haystaa bq walina ma fahmin sida looga saaro aniga, waxaan helayaa shaashado kale oo aan ahayn kuwa ka muuqda fiidiyahaaga mana saari karo shaashadda guud ahaan 🙁
Ku jawaab Carla
Waxaan xaqiijinayaa waxa kor ku xusan ee dadka kale soo bandhigeen inuu nadiifiyaha macruufku yahay mid aan micno lahayn laakiin aniga hadii aan xallin karo… .Waad ku mahadsantahay xogta…
Ma i caawin kartaa markaan rabo inaan badalo sawirkeyga muuqaalka ee Facebook, tan waxaan ka helaa shaashadda dusha sare waxaanan arkaa inay u shaqeyso fecebook, ma aqaano inay tahay in la dhaqaajiyo ama la joojiyo
Waad ku mahadsantahay macluumaadka lasaaray Es file Explorer iyo voila. Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada
Thanksssssss, waxay ahayd inaan tirtiro
sayid nadiif ah
wax waliba si yaab leh ayey u shaqeeyaan
Ku jawaab Android J5
Pana Guillermo Bermúdez waxay ku saxsan tahay arjiga ES FILE EXPLORER, dhibaatada waxaa keenay xaqiiqda ah in ES FILE ay keento arjiga ES WIPE ee la hawlgaliyo oo la joojiyo qayb ka mid ah arjiga.
Ku jawaab Julio
Waad salaaman tahay, kiiskeygu waa la mid yahay, waxaan haystaa LG K10 mana aqaano sida looga saaro shaashadda dusha sare, waxaa jira barnaamijyo yar oo aan ii fureynin taas awgeed
Jawaab Adrian Quintero
XALKU WAA FUDUD, WAA APP AAN DUULNAY IN WAA WALAAL, XAALKAYGANA WAA BAR TAYO, SI AAN U XALino AYAAN EEGNAYAA HALKA AANAN GELI KARNAY, TELEFOONKA, WHATSAPP IWM, WAANA SAMEEYNAA OO AAN SAMEEYNAYO APPKEENA HADDII, AAN BARNAAMIJI KARO QORAALKEENA WAAN HELI KARNAA KA HOR INTA AANAN NAGA BAXAYN, KADIBNA WAA APP AAN AAN DIIWAANNAYO INTA AANAN AQBAL KARI KARIN APP NOO XIRAY.
Waxaan gaadhay menu-ka si aan awood ugu yeesho, laakiin waxay u muuqataa cawl ...
Aad baad u mahadsan tahay runtii, tilmaamahaagu waxay ahaayeen kuwo waxtar badan
Juana 77 dijo
Waxaan furey barnaamijyo badan mana xallin dhibaatada. Xalka kiiskeygu wuxuu ahaa in la joojiyo tirtirka ES-ka ee barnaamijka sahaminta faylka Es oo markale ayaa la xaliyay mahadsanid
Waad salaaman tihiin, waxwalba waan qabtay waxna iima tarin. Maxaa kale oo aan isku dayi karaa? Aad baad u mahadsantahay!
Ku jawaab Ariana
Mahadsanid! Xaaladdayda hadday tahay macallinka nadiifka ah ee markii la soo dejinayo ay haysato qalab meesha uu ku xirayo badhanka shaashadda oo si otomaatig ah loo hawlgaliyo oo aanan si dhib leh u helin meel aan ka furo laakiin waan ku guuleystay!
Waad salaaman tahay, kiiskeygu waa la mid yahay, waxaan haystaa Samsung j7 Prime mana aqaano sida looga saaro shaashadda dusha sare, waxaa jira barnaamijyo yar oo aan i furin sababtaa awgeed
Waad salaaman tihiin, wax badan ayey i caawisay, aad baad u mahadsan tihiin. ????. Dhibaatadaydu waxay ahayd codsi la yiraahdo Simple Control oo aan rakibay maxaa yeelay waxaa jira waqtiyo aanan isticmaali karin badhanka bilowga ama gadaasha laakiin waan tirtirayaa, aad baad u mahadsan tahay ??.
Waad salaaman tihiin, wax badan ayey i caawisay, aad baad u mahadsan tihiin. ????. Dhibaatadaydu waxay ahayd codsi la yiraahdo Simple Control oo aan rakibay maxaa yeelay waxaa jira waqtiyo aanan isticmaali karin badhanka bilowga ama gadaasha laakiin waan tirtirayaa, aad baad u mahadsan tahay ?? ...
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Samsung J5 iyo in kasta oo aan arkay fiidiyahaaga kama saari karo shaashadda dusha sare. Ma i caawin kartaa? Mahadsanid
Mahadsanid ... haddii ay shaqeysay ... waqti dheer iyo dhowr jeer ayey igu qaadatay inaan dib u bilaabo qolka.
Telefoonkaygu waa LG G3. Dhibaatada aan kala kulmay arjiga ES File Explorer. Xitaa curyaaminta ma aysan shaqeynin, waa inaan ka saaraa. Waxaan u daayaa faallooyinka qofkasta oo ku caawin kara.
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa j2 intaasna kama qaadi karo, fadlan i caawi
Ku jawaab Ximena
Ka dib markii aan isku dayay habab badan, laba shay ayaa ii shaqeeyay, 1. gal xaalada degdega ah ka dibna adigoon wakhti badan siinin inaad ku soo gasho arjiga u baahan rukhsadaha, tani way ii shaqaysay maxaa yeelay hubaashii barnaamijkii i xannibay wali si buuxda looma buuxin, laakiin waxay u shaqeysaa hal cod markiiba, laakiin ugu yaraan way shaqeysaa hadii ay hal codsi oo keliya dhibaato leedahay.
2. waxa ugu fiican waa habka loo rakibo badhanka rakibida arjiga https://www.youtube.com/watch?v=Yd4tTxdvhpo Waxaan ka tagayaa fiidiyowga halka aan ku arkay xalka, tan haddii ay u shaqeyso mar horeba qummanaan, iyadoo la dhaqaajinayo badhanka ku jira arjiga.
Waxaan haystaa s5 oo waan iska fogeeyay dhammaan codsiyada iyo farriinta yar ee farxadda leh ee is dul saaran ayaa iga sii boodaysa. Garan maayo inaad gacan i siin kartid.
Ku guuleystey ka dib markaan ku adkeystay waxaan arkay in aan tirtiray baaraha feylasha way joojisay inay i siiso dhibaatada.
mahadsanid, barnaamijkaas nadiifinta ah ee nadiifka ah ee Masterka ayaa ahaa dhibaatada
I caawi!!! Waxaan ku guuleystey in aan "wax ka qoro barnaamijyada kale" goobaha, laakiin markii aan ku dhufto saddexda dhibic ee geeska midig, waxaan helayaa oo keliya laba ikhtiyaar: muujiya codsiyada nidaamka iyo dib u dejinta dookha waxba in la joojiyo dusha sare shaashadda
Ku jawaab Lucia
Waxaan sidoo kale la dhibtooday dhibaatadan toddobaadyo. Waxaan u aaday maareeyaha arjigaas si aan u dhaqaajiyo ama u joojiyo rukhsaddaas laakiin iima oggolaanayn inaan hawlgeliyo barnaamijyada qaarkood. Wixii aan sameeyay waxay ahayd inaan tirtiro 360 antivirus oo waliba banaanaatay meesha. markaa haddii sharraxaadda fiidiyowga aanad isku dayi karin inaad ka tirtirto codsiyadaas sayidkiisa ah ee loo yaqaan 'cleam master applications' ama meel kale oo laga xoreeyo ama laga yaabo in antivirus sida kiiskeyga tahay.
Waad salaaman tahay, waxaan haystay baaraha faylka ES-ka markii uu tirtirayay dhibaatadiisa ayuu xaliyay.
Ku jawaab Krlost
Ka tirtiro sayidka nadiifka ah; midka burushka yar ee barakaysan leh.
hi, qof fadlan ma i caawin karaa? Waxaan isku dayaa inaan cinwaanka google-ka ka helo j7 prime oo aan ku iibsado nooca android 8.1 iyo binary 6, laakiin markaan dhaqaajiyo oo aan joojiyo hadalka hadalka waxaan hoos ugu laabtaa caawimaadda iyo faallooyinka oo kaliya xulashooyinka barnaamijka ayaa muuqda. maxaan sameeyaa ?? Mahadsanid
Jawaab Sandro Esteban
Huawei Watch 2, falanqeyn iyo ra'yi